Kungani amakati engakwazi ukudla ushokoledi? Amakati kaNoti
Kungani amakati engakwazi ukudla ushokoledi?
Isithombe sendawo yokubeka uLaura Torres | | Ukudla
Amakati anelukuluku lokwazi, kangangoba kufanele ubuke lokho akufaka emilonyeni yawo kakhulu. Kukhona ukudla okuningana okunobuthi kubo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi sibanikeze kuphela lokho abangakudlangaphandle kwalokho ungaba nezinkinga ezinkulu kakhulu.
Okunye ukungabaza okuvame kakhulu esivame ukuba nakho lapho sihlala noboya obunjalo kungani amakati engakwazi ukudla ushokoledi. Uma ufuna ukwazi, qhubeka ufunde ngoba namuhla sizokwembula imfihlakalo.
1 Yini i-theobromide futhi kungani ikati lami lingakwazi ukudla ushokoledi?
2 Ngazi kanjani ukuthi ikati lami lifakwe ubuthi ngokudla ushokoledi?
2.1 Ngenzenjani uma ikati lami lidle ushokoledi?
2.2 Luyini umuthi wokwelashwa ngobuthi kashokoledi?
Yini i-theobromide futhi kungani ikati lami lingakwazi ukudla ushokoledi?
Ushokoledi uyingozi emakati nasezinja.
Ushokoledi uqukethe i-caffeine, theobromine nokuqukethwe okunamafutha amaningi. Izinhlobo ezinobuthi kakhulu zamakati yi-cocoa powder kanye nemigoqo yoshokholethi yokupheka.
I-Theobromine kanye ne-caffeine ingeqembu lamakhemikhali lama-alkaloids methylxanthines.
La theobromine yingxenye enkulu enobuthi yoshokoledi futhi imbangela enkulu yobuthi ngokufaka ushokoledi emakati nasezinja.
Ikati lakho alikwazi ukudla ushokoledi ngenxa yobuncane bawo kanti isibindi salo sidla inyama. Lokhu kubenza bangabi nama-enzyme athile asiza ukuhlanganisa izinto ezinobuthi, kufaka phakathi i-theobromine. Ngakho-ke uma inani elifakiwe beliphezulu kakhulu, le nhlanganisela izonqwabelana egazini lekati. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe okunamafutha amaningi kungadala isifo sokuqaqamba kwamalunga.
Njengomphumela walezi zinto, Uma ikati lakho lingadakwa, isigaba sokululama besingahamba kancane kunenja.
Ushokoledi ubeka engcupheni enkulu yezempilo amakati nezinja. I- Ubuthi balokhu buzoya ngomthamo, okusho ukuthi, kusilinganiso seshokholethi esidlayo nesisindo sekati lakho, ngaphezu kwephesenti lokuhlanzeka koshokholethi. Ukuba ushokoledi wobisi ukuthi unobuthi obuncane.
Ngakho-ke, uma ikati lakho lidla ngisho nocezu oluncane lwalokhu kudla, impilo yalo ingaba sengozini.
Ngazi kanjani ukuthi ikati lami lifakwe ubuthi ngokudla ushokoledi?
Izimpawu zihlukahlukene kakhulu, lokhu kuba okulandelayo:
Khulisa umfutho wegazi.
Ukukhipha amathe ngokweqile
I-Polydipsia (idinga ukuphuza amanzi amaningi).
Ngenzenjani uma ikati lami lidle ushokoledi?
Ezimweni ezibucayi kakhulu, okungukuthi, kulezo lapho ukuphuza kube kakhulu khona, isilwane singafa ngamahora angama-24 kuphela. Ngakho-ke uma ikati lakho lidle ushokoledi, Kubaluleke kakhulu ukuthi umyise esikhungweni sezilwane ngokushesha ukuze ugweme ukufinyelela kuleso simo.
Okokuqala nje Shayela udokotela wezilwane umtshele ukuthi uya egumbini lezimo eziphuthumayo, kubalulekile ukuthi ucacise ukuthi udle ushokoledi.
Ungazami ukumhlanza ekhaya, ngoba namakati kuyinkimbinkimbi futhi singadala umonakalo omkhulu.
Uma sine ukwenziwa kwekhabhoni ekhaya singanikeza ikati lethu amaphilisi ama-5. I-carbon esebenzayo inesibopho sokwehlisa ijubane ekubuyiseleni kabusha i-theobromine ne-caffeine, okuvimbela ukumuncwa kwayo kungapheleli.
Uma ungenawo amalahle acushiwe ekhaya, kungaba kuhle ukuwunikeza amanzi noma ukudla ukunciphisa ukuncipha esiswini bese wehlisa izimpawu.
Uma ucabanga ukuthi ikati lakho likwazile ukudla ushokoledi kepha awunasiqiniseko, ngincoma ukuthi uligcine emahoreni angama-24 alandelayo ukuthola noma yiziphi izimpawu ngokushesha okukhulu.
Luyini umuthi wokwelashwa ngobuthi kashokoledi?
Ukwelashwa udokotela wezilwane akubona kufanele kuzoncika esimweni lapho ikati lakho lifika khona esikhungweni sezilwane kanye nezimpawu esinazo lapho lifika emtholampilo wezilwane.
Uma kuqinisekile ukuthi okudlile ngushokoledi, into yokuqala abazoyenza esikhungweni sezilwane ukwenza ukuhlanza nokwenza ukuhlanza esiswini. Futhi-ke uzonikezwa amalahle acushiwe ahlanganiswe namanzi ngesirinji.
Endabeni yokungaqiniseki, mhlawumbe, into yokuqala eyenziwe i-x-ray nokuhlolwa kwegazi.
Ukugwema ukungabi namanzi nokukhuthaza ukukhiqizwa komchamo, uzonikezwa i-fluid fluid. Ekugcineni, uzonikezwa imithi yokwehlisa i- ukushaya kwenhliziyo nomfutho wegazi. Nezidakamizwa zokudambisa ikati kanye nama-anticonvulsants.
Njengesilinganiso esingeziwe, ikati lakho lingaba nepayipi elibekwe ukuvimbela i-caffeine ukuthi ingabuyiselwa kabusha esinyeni.
Futhi, uma kwenzeka ukuthi ikati lakho lidinga ukulala esibhedlela izinsuku eziningi futhi line-pancreatitis, kungabekwa ngisho ne-jejunostomy tube. Ngalolu phenyo kutholakala ukuthi amanyikwe awasebenzi ngesikhathi sokululama. Kodwa-ke, kuyinqubo ekhandlayo efakwa ngokuhlinzwa nangaphansi kwe-anesthesia.
Sengiphetha, gcina oswidi noshokholethi emathinini avalwe ngci kude nekati lakho, ngoba ububi bakhe obuncane bungagcina buya kudokotela wezilwane nasebunzimeni.
Ngaso sonke isikhathi kufanele sibheke ukunika umngane wethu onoboya okuhle kakhulu, kepha kunokudla okuningi okufanele sikuqede ohlwini. Imvamisa kufanele unikele nje Ngicabanga futhi ukudla okumanzi okuqondene nama-fining. PKepha uma ufuna ukumnika ukudla okungokwemvelo, ngaphezu koshokholethi kukhona okunye ukudla ongeke umnikeze nakho, okufana nalokhu: amathambo, u-anyanisi, i-tuna ekheniwe (ngaphandle uma kuboniswa amakati), igalikhi.
Ngiyethemba ukuthandile lokhu okuthunyelwe futhi wakuthola kuwusizo. Futhi uyazi, ukukuvuza, ngincoma ukuthi uthenge Ukuphathwa okuqondile kwamakati. Ngale ndlela, impilo yomngani wethu ngeke ibe sengcupheni, futhi uzoba nokuthula.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ukudla » Kungani amakati engakwazi ukudla ushokoledi?
Ikati laseBangali, uboya obunokubukeka kwasendle nenhliziyo enkulu
Wayengubani uDon Gato, isilwane esithembekile se-Auronplay